Dhakhtar daaweeyey 750,000 oo qof oo abaalmarin caalami ah la gudoonsiiyey - BBC News Somali
Dhakhtar keligiii qalliino u sameeyey 750,000 oo qof oo ku nool Sudan ayaa lagu sharfay abaal marin caalami ah.
Dr Tom Catena, oo 53 sano jir ka soo jeeda New York wuxuu ka tirsan kaniisad madhabka Katooliga ee Kirishtaanka, waxaa gudoomay abaalmarinta bini'aadamtinimada ee the Aurora Prize for Awakening Humanity.
Khudbadiisa wuxuu ugu baaqay bulshada caalamka inay gacan ka gaystaan xal u helida xayiraada lagug hayo gargaarka bini'aadamnimo.
Lahaanshaha sawirka Adriane Ohanesian/Aurora Humanitarian Initiative
"Dawladda Suudaan waxay ku lug leedahay khilaafka kala dhaxeeya mucaaradka kaasi oo ku aadan kan qaybinaya gargaarka" ayuu yiri Dr Catena said.
"Waa inaynu xoogaa isgalinaa dareen."
Image caption Dakhatrku wuxuu ugu baaqay madaxweyne Cumar Al-Bashiir in uu wax ka qabto dhibaatada ka taagan qaybinta gargaarka
"Mucaaradka ayaa aamisan in daawooyinka ay dawlada qaybinayso ay haweenkooda madhalays ka dhigayso, isla markaana waxay doonayaan in ay ka helaan daawooyin deeq bixiyeyaasha reer Galbeedka ayna soo marsiiyaan dalka dariska ah ee Suudaanta Koonfureed" ayuu yiri Dr Catena.
Dhakhtarka ayaa waxaa abaalmarinta gudoonsiiyey jilaaga George Clooney, kaasi oo yiri "Dhamaanteen waxaan leenahay masuuliyad aynu xal ugu raadino dhibaatooyinka aduunka. Waana masuuliyad mid kasta oo innaga mid ah shakhsiyan inoo saaran".
Carruurta xalab oo xanuunnada dhimirku ku soo badanayaan
Lahaanshaha sawirka Aurora Humanitarian Initiative
Muxamed Darwish, oo 26 sano jir ah wuxuu ka mid ahaa sadex oo kaliya oo ku haray magaalada Madaya, oo ku jirta go'doon.
Jamila Afghani oo Kabul ka timid ayaa sidoo kale abaalmarinta loo sharaxay waxay kala shaqeysaa culima'udiinka xuquuqda haweenka.
Waxay tiri: "Marka aad haweenay waxbarto waxay la mid tahay adigoo qoyska oo dhan waxbaray. Waxay bartaan waa la wadaaga"
Dhinaca kale Dr Denis Mukwege, oo ka yimid Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Congo wuxuu caawiyey oo uu xannaano u fidiyey in ka badan 50 kun oo qof loo gaystay tacadiyo galmo, wadankaasi oo lagu magacaabay caasimada kufsiga aduunka.